Global Voices teny Malagasy » Macedonia: Sakura – Cherry Blossom Celebration in Skopje …………Makedonia: Sakura – Firavoravoana Fa Vaky Felana Ny Serizy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Febroary 2018 11:15 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Stojanovski Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Azia Atsinanana, Eoropa Afovoany & Atsinanana, Japana, Makedonia, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fiteny, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Tanora, Tsidika, Zavakanto & Kolontsaina
Na dia vitsy aza ireo Japoney miaina ao amin'ny Repoblikan'i Makedonia, maro ireo mponina ao an-toerana no nandray anjara tamin'ny fety faharoa fankalazana ny Sakura  isan-taona – fety natokana ho an'ireo voninkazon'ny serizy ao Skopje, renivohitr'i Makedonia. Nampidirin'ireo mpikarakara ny fety ireo dojos  fanaovana fanatanjahantena haiady, ary vao haingana ireo blaogera sasantsasany malaza no nanomboka ny blaogy ifandrimbonana, Japan@mk  [MKD], sy nanomboka nanely ny resaka manerana ny tontolon'ny blaogy makedoniana.
Ny 12 Aprily no natao ny fetibe, teo amin'ny lalambe iray misy ireo hazo-na serizy Japoney nilahatra sy anatin'ny felany tanteraka, eo ankilan'ny kianjaben'i Skopje. Nahitana ireo fampisehoana haiady ny fandaharam-potoana, ny fiantsàna tononkalo haiku  amin'ny fiteny Makedoniana, narahin'ny feonkira nolalaovina tamin'ny sodina Japoney, ny fanaovana ‘origami’, fanoratana ny anaran'ireo mpandray anjara tamin'ny sorakaliana Japoney, ary fanandramana ireo vokatra ara-pahasalamana novokarina avy amin'ny holatra Japoney.
Noho ny fametrahana tambajotra sosialy anatin'ny vondrom-piarahamonina, blaogera ampolony no nampiasa ny zava-misy mba ho fantatry ny daholobe, anisan'izany ireo tonga avy amin'ny tanàna hafa maro. Ny ankamaroan'izy ireo, toa an'i Bi, Volan, Strumjan, ary neW1, dia nandefa ireo sary goavana taorian'izay, raha toa ireo hafa nanoratra lahatsoratra misy fahatsapàna nanome tombony tokoa. Ny antony tsy nahatongavany no nalefan'i Nadezna sy HibernusCorvus.
Ireo mpikambana amin'ny Samurai Dojo manao fampisehoana. sary an'i Volan.
Bi, iray amin'ireo mpikarakara sy mpanao Iaidō  no nanoratra mikasika ny traikefany tao anatiny:
Tena tafita ireo origami, ary notontosaina tao anaty tranoheva telo… [ho an'ireo satroka samurai, karandoha ary saka]. Tena faly ireo ankizy, ary maro tamin'izy ireo no nitondra ireo satroka samurai-ny tany amin'i Nahomi [ramatoa Japoney izay nanao ny sorakaliana] mba hanoratana ny anaran'izy ireo amin'ny fiteny Japoney.
Nahazo ny tena traikefa Makedoniana i Nahomi satria tsy navelan'ireo mpijery haka aina mihitsy izy. Nohodidinin'izy ireo izy, atolotr'izy ireo eo ambany orony ny taratasy mba hanoratana ny anarany amin'ny fiteny Japoney, tsy misy filaminana. Verin'izy ireo mihitsy aza ny ranomaintiny tamin'izany. Fanina izy satria tsy milahatra ireo olona, saingy nanaiky ireo fangatahana rehetra tamim-pitiavana ary fomba tsy nisy tomika…
Nanjary tongalafatra ny haiku, ary vahiny telo no namaky tononkalo milamindamina avy amin'ireo andrarezina japoney sy ireo poety makedoniana. Nanao be marenina ny sasantsasany tamin'ireo mpanatrika ary nitaraina ho leo… Ny mpanatrika sasany naneho fomba fiaina tsy mampahazo aina tamin'ny fahalianana manafintohina, tamin'ny fitazonana sy fisintonana mihitsy aza ireo sabatra sy ny bokken  teny an-tanan'ireo mpandray anjara.
Antenaiko fa amin'ny taona ho avy dia hanana hetsika iray tena mahaliana kokoa isika ary fandaharam-potoana tena mahafinaritra kokoa, miaraka aminà singa maro kokoa, ary hanampy bebe kokoa mihoatra noho ny fanomezana toerana fotsiny ny tanàna, dia hanome mihoatra noho ny fanohanana ara-moraly ny kaonsily: Niaina fotoana nahafinaritra ihany anefa isika, na teo aza ireo zavatra ratsy tsy araka ny kolontsaina nasongadina etsy ambony ireo:)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/02/20/115124/